राशिफल २०२० को ! सबै राशिका लागि भाग्य प्रेम अध्ययन यात्रा ! - Read4yourmind
Home / Blogging / lifestyle / राशिफल २०२० को ! सबै राशिका लागि भाग्य प्रेम अध्ययन यात्रा !
राशिफल २०२० को ! सबै राशिका लागि भाग्य प्रेम अध्ययन यात्रा !
September 18, 2019 Blogging, lifestyle
राशिफल सबै राशिका लागि भाग्य,प्रेम,अध्ययन,यात्रा २०२० को !
यो वर्ष सबै राशिफलका लागि धेरै अस्थिर हुनेछ। स्थिरताको रहस्य फेब्रुअरी देखि शुरू देखि एक महत्वपूर्ण प्रभाव संग खगोल घटनाहरु र ग्रह श्रृंखला मा निहित छ।
ज्योतिषविद्हरूका अनुसार, २०२० मा, धेरै मूल निवासीहरूले आफ्नो जीवनमा नयाँ चरण सुरु गर्दछन्, विगतका साथ शान्ति स्थापना गर्नेछन् र एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनुभव हुनेछ, यदि यो आफ्नै गल्तीहरूको कारणले प्राप्त गरेको हो भने पनि।
धेरै राशि चिन्हहरूले सबै नियमहरू, अवरोधहरू, र परिस्थितिहरूलाई तोड्न छनौट गर्दछ जुन उनीहरूलाई अहिले सम्म रोकिएका छन् र, यस पटक, उनीहरू आफैले कार्य गर्दछन्।
१२ राशि चक्रका स्थानीय जातिको एउटा महत्त्वपूर्ण अंशलाई ती चीजहरूको अझ राम्ररी समझ छ जुन अहिलेसम्म अस्पष्ट थियो र तिनीहरूले अन्तमा केही कट्टरपन्थी कदम चाल्न सक्षम भएका छन्।
वर्ष २०२० धनु र मिथुनले आफ्नो योजनाहरू पूरा गर्न तयार भएको पाए।
वृश्चिक उनीहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न द्रुत गतिमा अघि बढ्दछन् र यदि आवश्यक छ भने तिनीहरू केही जोखिम लिन तयार छन्।
वृषभ मूलका कडा परिश्रम गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो प्राकृतिक प्रतिभा विकास गर्दछन्। तिनीहरू सतर्क हुनु आवश्यक छ किनभने उनीहरूले छनौट गरेको मार्ग अवरोधहरूले भरिएको छ।
माया को राशिफल २०२० को !
शुक्र सबै ज्योतिषीय (sign) सहयोगी हो र २०२० को सुरूदेखि नै पूर्ण लाभदायक छ। तपाईं सूक्ष्म र गहन तरिकाले खुशीले भर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईंले समय बित्दै जाँदा महसुस गर्नुहुने छैन किनभने तपाईंको ध्यान सम्भावित सम्बन्धमा केन्द्रित छ।
यदि तपाईं दीर्घकालीन सम्बन्ध सुरू गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंसँग सफल हुने सबै संभावनाहरू छन्! यदि, तथापि, तपाईं मात्र एक साधारण फिलीling्ग चाहानुहुन्छ, यो पनि सही क्षण हो।
दिनहरू बित्दै जाँदा, तपाईंले आफ्नो प्रेम जीवनलाई पुनर्गठन गर्न र स्थिर गर्न केही गम्भीर चिन्तन दिनुपर्दछ, विशेष गरी यदि तपाईं वर्तमानमा जुन चीजहरू देख्नुहुन्छ त्यसबाट खुसी हुनुहुन्न।
यदि तपाईं स्वतन्त्र मिलनमा बस्न रुचाउनुहुन्छ भने, यो नबिर्सनुहोस् कि विवाहको पनि राम्रो, सिद्ध भागहरू छन्। तपाइँको रुचि कसरी पछ्याउने जान्नुहोस्! वर्षको दोस्रो भागमा, तपाइँ एक आकर्षक व्यक्तिलाई भेट्नुहुनेछ, तर, त्यो क्षणमा, तपाइँ त्यो बैठक साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण छ भनेर महसुस गर्न सक्नुहुन्न। त्यस पछि, चीजहरू द्रुत रूपमा विकसित हुनेछन्। तपाईं एडीमा मायाको शिकार हुनुहुनेछ, प्राय जसो तपाईं भन्दा कान्छीको साथ, कम्तिमा आत्मामा। तसर्थ, तपाईं कसैलाई भेट्नुहुनेछ जससँग तपाईं बौद्धिक स्तरमा रोचक कुराकानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यी छलफलहरुबाट शुरू गरेर, चीजहरु अन्धाधुन्ध बढि गहन भावनाहरुमा प्रगति हुनेछ।
पैसा सबै राशिका लागि २०२० को !
२०२० को सुरुवातदेखि तपाईंले केही महत्त्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेवारीहरू लिनुपर्नेछ। तपाईंको व्यक्तिगत सीप प्रदर्शन गर्न यसको लाभ लिनुहोस्। आफैलाई कोक्स गर्नुहोस् कि तपाईं सफलतापूर्वक सम्झौताहरू गर्न र लामो समयदेखि चलिरहेको सम्झौताहरू निष्कर्षमा पुर्‍याउन पूर्ण रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ। केही भर्जोस र लिब्राका लागि, पैतृक सम्पत्तिले धेरै कष्टप्रद मुद्दाहरू खडा गर्छ, त्यसैले यो सतर्क रहन सल्लाह दिइन्छ यो तपाईको हो भन्नेबाट वञ्चित हुन नपरोस्। राम्रो विचार भनेको सक्षम वा राम्रो ज्योतिषीको सल्लाह लिनु हो। तपाईंको उत्कृष्ट वित्तीय लेनदेन वा घर जग्गा कारोबार गर्ने संभावनाहरू बढ्नेछ। बर्षको पहिलो आधा आफ्नो घर नवीकरणको लागि आदर्श हो। यद्यपि, सावधान रहनुहोस् तपाईंको बजेट नाघ्न र andणमा नपर्न। जुलाई २०२० को सुरूवातले वित्तको मामलामा नाजुक अवधि ल्याउनेछ। यस अवधिमा तपाईंको खर्च घटाउनुहोस् र धैर्यतासाथ सशस्त्र हातहरू लिनुहोस् जब तपाईं उत्तम दिनहरू पर्खनुहुन्छ। सेप्टेम्बर सम्म, तपाईं केहि लाभदायक लेनदेन को निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, एक बैठक तपाइँको आर्थिक स्थिति स्थिर पार्न उपयोगी साबित हुनेछ। जुवामा ठूलो समस्याहरू छन्। जोखिम लिनको चाहना बिजुलीको सूक्ष्म वातावरणको प्रभावमा दश गुणा बढ्नेछ र तपाईंलाई वित्तीय सञ्चालनको संख्या बढाउन धक्का दिइनेछ। क्यान्सर र कुम्भ मूल निवासीहरू वास्तवमै छोटो अवधिको अवधिमा पैसाको एक ठूलो रकम जित्नको लागि तिनीहरूसँग भएको सबै बेट गर्न मूडमा हुनेछन्। नेपच्यूनको विशेष सहयोगको कारण, २०२० को अन्तिम भागमा पनि उनीहरू कुनै विफलता भोग्नेछैनन् र तिनीहरूले सम्भवतः ठूलो सम्झौता गर्नेछन्।
स्वास्थ्य सबै राशिका लागि २०२० को !
ताराहरूले मेष राशि र स्वास्थ्य सम्बन्धी क्यान्सरलाई २०२० को सुरूदेखि नै जोगाउने छैनन्। तपाईको कलेजो र अन्य आन्तरिक अ ,्गहरुमा मद्दत गर्नको लागि रगत पातलो आहार अनुसरण गर्ने सल्लाह दिइन्छ, जुन अत्यधिक भारित छ। खाना अधिक बनाउने रोक्नुहोस्! मधुमेह रोगीहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो देखभाल गर्नु पर्छ! केहि माइग्रेन वा दन्त दुखाइहरू देखा पर्न सक्छ, जसले केहि गम्भीर समस्या सिर्जना गर्न सक्दछ। तपाईको ठूलो ख्याल राख्नुहोस् र तपाईको फिक्रीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो राज्य मा हुन को लागी बुझिन्छ, तर यो हानिकारक हुन सक्छ। वसन्त अवधि तपाईंको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुनेछ र तपाईं आफ्नो आश्चर्यजनक उर्जाको कारण कीटाणुहरूलाई हराउन व्यवस्थित गर्नुहुनेछ। तपाईंको सबै उर्जा खेर फाल्ने प्रयास नगर्नुहोस् किनकि चाँडै नै तपाईंले नयाँ भाइरसहरूसँग लड्न आफ्नो भण्डार प्रयोग गर्नुपर्छ। जोखिम लिनुहोस् र याद गर्नुहोस्, केहि रोगहरू विरलै पाए पनि, ती अवस्थित छन्। २०२० को दोस्रो भागमा कदम, आराम, हास्य र सन्तुलित आहारले थकानको ती अचानक बाउट्सलाई हटाउनु पर्छ जुन तपाईंसँग केही समयको लागि prowling रहेको थियो। वर्षको अन्तिम भागमा, राशिफलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्यतया राम्रो हुनेछ। तपाइँ प्लूटोको प्रभावको बारे सावधान हुनुपर्छ, जुन धेरै राम्रोसँग परिभाषित छैन। तैपनि, तपाईसँग चिन्ता लिने कुनै चीज छैन, तर समय-समयमा तपाई सबै भन्दा राम्रो अवस्थामा महसुस गर्नुहुन्न र तपाईको शारीरिक र मानसिक सहनशीलता कम हुँदै गइरहेको छ। भिटामिन र आहार पूरकहरू लिन सल्लाह दिइन्छ। जे होस्, कम मासु र अधिक हरी तरकारीहरू सहितको आहार सिफारिस गरिन्छ। २०२० मा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, र मंगल ग्रहले प्रत्येक राशिफलको गन्तव्यलाई प्रभाव पार्नेछ। बृहस्पति, अवसर र भाग्य को ग्रह, हामीलाई हरेक अवसरको फाइदा लिन मद्दत गर्दछ जब यसको प्रभाव फाइदाजनक हुन्छ। जब बुध पूर्वस्थितिमा छ, हामीले आशा र समस्या र नोक्सानबाट जोगिन आवश्यक छ। अन्तमा, कुंडलीले भविष्यवाणी गर्दछ कि २०२० ले हामीलाई पूर्ण रूपमा चकित पार्नेछ र सबै मूल निवासीहरूको प्रेम जीवनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। व्यावसायिक रूपमा, तपाईले गरिरहेका धेरै (धेरै) चीजहरू मध्ये एक नयाँ डोमेनमा सुरुवात रम्प बन्ने छ, बहु सन्तुष्टि र उत्कृष्ट आर्थिक लाभहरूको साथ। नयाँ कक्षाको लागि साइन अप गर्नुहोस्, फरक सीप पूर्णतामा सुधार गर्नुहोस्, छुट्टिमा जानुहोस्, नयाँ रोजगारी पाउनुहोस्।
CAREER २०२० को !
वार्षिक राशिफलका अनुसार, यदि तपाइँ कामसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो जान्नु राम्रो हुन्छ कि २०२० को पहिलो महिनामा, सबै कुरा एक यात्रा वा स्थान परिवर्तन पछि समाधान हुन सक्छ। जे भए पनि, मौका तपाईको पक्षमा हुनेछ, तपाईका सबै प्रयासलाई समर्थन गर्दै। राम्रो विचार भनेको काममा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नबाट अलग रहनु हो किनभने सबैजना उनीहरूसँग सहमत हुँदैनन्। यस तरिकाले, तपाईं कुनै पनि अनावश्यक संघर्षबाट बच्न सक्नुहुन्छ। बाहिर नजोल्ने प्रयास गर्नुहोस् र, अहिलेको लागि, अन्यलाई पछ्याउनुहोस्। मे र जुनमा, राम्रो बृहस्पतिको सहयोगमा, तपाईंको व्यावसायिक स्थिति स्थिर हुनेछ, तपाईं आफ्नो महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईं एक प्रमुख परियोजना पूरा गर्नमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्नुहुनेछ। यो तपाईंको जीवनको एक उत्तम अवधि हो र तपाईंले कार्य गर्नु अघि राम्रो सोच्नु फाइदाजनक हुन्छ। वर्षको दोस्रो भागमा, तपाईं सफल हुनको लागि धेरै उत्प्रेरित हुनुहुनेछ। शनिले एक प्रकारको महिमा खोज्नको लागि क्यान्सरलाई उक्साउँदछ। कुंभ राशिको एक असाधारण कार्य क्षमता छ। तिनीहरूले बेकारका कामहरू गर्दैनन्, न त ती बोरिनेछन्। मूल निवासीहरूले आफ्ना उद्देश्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन् र तिनीहरू परिपक्वता प्राप्त गर्न निरन्तर लगनशील भई कार्य गर्दछन्। पुरस्कार देखिन असफल हुने छैन। २०२० को अन्त्यतिर, मीनहरू अधिक कुशल र उद्यमी हुनेछन् र उनीहरूले कसरी आफ्नो टीमलाई जित्न प्रेरणा दिने भनेर जान्ने छन्। तर यदि कसैले उनीहरूमा केहि थोपाउन कोशिस गर्छ भने सम्भवतः तिनीहरू रिसाउनेछन्।
राशिफल २०२० को ! सबै राशिका लागि भाग्य प्रेम अध्ययन यात्रा ! Reviewed by Tom jackson on September 18, 2019 Rating: 5